British Airways neLufthansa kumiswa kwendege: Cairo Airport haina kuchengetedzeka
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » British Airways neLufthansa kumiswa kwendege: Cairo Airport haina kuchengetedzeka
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Kufamba Nhau • Egypt Kudzokorora Nhau • Hurumende Nhau • nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Hofisi yeUK yekune dzimwe nyika yakavandudza mazano ekufambisa kuEjipitori nezuro uye ichinyevera vagari vayo kuti: "Kune njodzi yakanyanya yehugandanga kurwisa kubhururuka"
Panguva imwecheteyo, British Airways yakanzura ndege dzese dzaipinda nekunze kweCairo kwemazuva manomwe anotevera vachigashidza mapepa kumapurisa akagumbuka nenhamba yefoni yakabatikana seyamuro.
Panguva imwecheteyo, Lufthansa German Airline yakaita zvimwe chete asi iri kutangazve nendege nhasi (Svondo)
British Airways neLufthansa - mbiri dzendege huru muEurope - dzakamisa nendege kuCairo nemugovera, kunyangwe ndege dzava kuda kukwira.
"Sezvo kuchengetedzeka kuri pamberi pekutanga muLufthansa, nendege yambomisa ndege dzayo kuenda kuCairo nhasi sedziviriro, pachiri kuitwa ongororo," akadaro Lufthansa muchitauriri. "Hatina rumwe ruzivo parizvino."
Sekureva kwevanopinda mukati, hapana kutyisidzirwa kwakatarwa asi ndege dzirikubata kunetseka kuri kuramba kuripo nezvezvinetso zvekuchengetedza paairport yeCairo. Kumiswa kwendege kuchapa nendege mukana wekuwongorora mamiriro acho, zvinodaro.
Hofisi yeBritish Kunze kwenyika yakayambirawo pamusoro pe "kuenda kwese kuGavhuna yeNorth Sinai, nekuda kwekuenderera mberi kwekuita mhosva nemagandanga kumapurisa nemauto ezvekuchengetedza izvo zvakakonzera kufa," rakadaro sangano.